Cadar & Muhiim
Guriga & Daryeelka Shakhsiyeed
Mashiinka & Buufiye
Dhalo Aluminium Aluminium ah
Qalabka Aluminium aerosol
Xashiishadda & Sigaarka
Qalabka Dhalada Cadarka
Dhalada Saliida Muhiimka ah ee Aluminium
Buufiye buufin buufiye
Ahama Bir Straw
Tuubada Aluminiumka & Jar
Tubaakada Sigaarka & Cigaarka oo la jaro
Sanduuqa duubista kahor
Dhalada saliida dawada
Wararkii Ugu Dambeeyay ee Alaabta
Istaraatijiyad Horumar Waara
Ka Yaree Qashinka Hawsha Badeecada
U-doodayaasha Qaababka Ganacsi ee Cusub
Kordhinta Baahida Joogtada ah
Xusuusta xuska sanadguuradii 11aad ee EBI
Dabaaldegdeena waxaa lagu qabtay hudheelka Nanchang Boli. Oo waxaannu ku martiqaadnay dhammaan alaab-qeybiyeyaasha ugu wanaagsan ee loogu talagalay daasadaha aluminium ee Shiinaha inay ka qayb qaataan xafladdayada. F ...
Dhacdooyinka waaweyn ee Abriil
Abriil runtii waa bil gaar ah. Xiisadii "March Expro" ayaa hada dhamaatay. Kooxdayadu wali waxay ku dhexjiraan farxada inay gaaraan yoolalka waxqabadka waqtiga kahor. Sannad-guuradii 11aad ee EBI ayaa si aamusnaan leh ku timid, dabaaldegiina waa yimid. Kaliya labadii maalmood ee ugu dambeysay ayaa loo daayay furitaanka rasmiga ah. Dhamaan ...
2021, Bilow Cusub!
2020, Si dhakhso leh ayaad u baxday! Cudurka faafa ee degdega ah, waxbarashadii oo khalkhal galisay, shaqadii iyo noloshiiba …… Waqtigu wuxuu umuuqdaa mid la cadaadiyey, wali waqti fiican ma helin, waana ku dag dagi doonaa inaan sagootino! Macsalaameyso sanadka 2020 2020, waxaan ku wajahan nahay dabaysha! Waan dadaalnay! Waxaan leenahay goyn wanaagsan! - iib ...
Ku soo dhowow xafladda EBI！ Si loogu dabaaldego kirismaska! Waxqabadka Kirismaska ​​ee dabaaldegga waa nooc ka mid ah dhaqanka EBI. Dhamaanteen waan jecel nahay xafladaan. Kani waa Kirismaskii 11aad ee aan wada ciidi jirno. Waxaan jeclaan lahayn inaan idinla wadaagno. Geedkeena Kirismaska ​​waa mid aad u qurux badan. Geedka waxaa ku daboolan shaqaale & ...
Waa maxay qadarka iibkaagu sannadkan? - Waxaan gaarnay 100million RMB.
On Diseembar 3, 2020 taas oo u ah daqiiqad taariikhi ah EBI! Maalintan, waxqabadkeennu wuxuu dhaafay marinkii 100 milyan RMB !! Wada-hawlgalayaasha EBI runti si adag ayey u shaqeeyaan !! Saameynta cudurka faafa, waxaan si deg deg ah u hagaajineynaa jihada ， bedelnaa istiraatiijiyadda ， Iyo ...
Sidee macmiilkeennu u odhanayaa?
Sidee macmiilkeennu u odhanayaa? Baryahan dambe waxaan ka helnay dhowr warqad amaan ah oo ka socota macaamiisheena dhanka taageerada wanaagsan ee ay ka heleen EBI. Sharaf weyn ayey noo tahay inaan u adeegno dhammaan macaamiisheenna. Waxaan jeclaan lahayn inaan idinla wadaagno nuxurka warqaddan, fadlan hoos ka akhriso warqadda. Mid ka mid ah caadadeenna caadiga ah ...
U dabbaaldegaya Sannad-guurada gelitaanka shaqaalaha
Tan iyo markii la aasaasay 2010, EBI waxay ku guuleysatay guulo la taaban karo 10-kii sano ee la soo dhaafay iyada oo ay hogaaminayaan maareeyaha guud iyo maareeyayaasha kale iyo dadaalka wadajirka ah ee shuraakada kale. Si aan ugu muujino mahadnaqa saaxiibadeena shaqadooda adag iyo inaan xusuusano waqtiga aan haysanno ...
Ma gacan ka geysan kartaa qaabeynta astaanta? - HAA, Waxaan bixinaa wax ka badan baakadaha
Kooxda naqshadeynta farsamada EBI waxay dhiseysaa laga bilaabo 9th 2010. Waxaan ka caawinay boqolaal macaamiil ah inay naqshadeeyaan astaanooda iyo muuqaalkooda Xogta Kooxda Farsamada: Xubnaha Kooxda: Koox xirfadle ah ayaa taageero xoog leh u noqon doonta ganacsigaaga. Tusaalaha kiiska: Naqshadeynta iyo caaryada aan horay u sameyno. Sida loo helo ...
Bishii Sebtembar ee xamaasadda, waxaan hubnaa inaan guuleysaneyno
Iibsiga Iibsiga ee Sebtember waa iid aan ganacsatada shisheeyaha ahi seegi karin, oo EBI hubaal kama maqnaan doono. Lushankii quruxda badnaa, EBI waxay bilawday bishii Sebtember iibsashada Bandhigga iyo kullanka bilowga PK. Waxaan dooranay inaan leenahay firfircooni ballaadhin oo aan ku kala bixinno qof walba R ...
Dhaqanka Tababarka ee EBI - Waxaan kor ugu qaadnaa kooxdeena qaabkan
Nidaamka la talinta ayaa taariikh dheer ku leh Shiinaha. Waa xaalad ay macallimiintu ardayda ku hoggaamiyaan inay waxbartaan, shaqeeyaan oo ay noolaadaan si ardaydu si fiican oo dhakhso leh ugu dhexgalaan shaqadooda. Badanaa, nidaamka hagista Shiinaha ee soo jireenka ah waxaa loo qaybiyaa laba fikradood: tan koowaad waa sayidku ...
Sidee si sax ah loogu isticmaalaa gacmo nadiifiyaha?
Maalmaha uu fayrasku faafayo, isticmaalka nadaafadda gacmaha lagu nadiifiyo ayaa si gaar ah muhiim u ah. Looma baahna in lagu luqluqo biyo, taas oo qof walba waqti u haysa isla markaana gaadha saamaynta jeermiska. Laakiin habka khaldan ee loo adeegsado xalka fayodhowrka gacmaha ka madhan kama saari karo waxyeelada ...
Runtii waan soo laabanay
Bishii Febraayo 24, 2020, ka dib muddo bil ka badan oo go'doomin guri ah, shaqaale kasta oo ka tirsan EBI wuxuu si nabadgelyo leh ku yimid shirkadda. Markaan dib ugu laabanno xafiiska, shirkaddu waxay u diyaarisay laba dhacdo oo gaar ah qof walba. Shaqaale kasta oo EBI ah wuxuu keenaa cunnadiisa uu jecel yahay si uu ula wadaago qof walba. Kadib e ...
Xalka Baako Eco
Househould & Daryeele Shakhsiyeed
Qolka 1744, Dhismaha Xinlifang, No. 1216 Ziyang Road, Degmada Gaoxin, Nanchang, Jiangxi, Shiinaha